Voronga kusimudzira netball | Kwayedza
Voronga kusimudzira netball
03 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-02T19:26:41+00:00 2020-01-03T00:00:48+00:00 0 Views
SHASHA yakambonetsa mumutambo wenetball, Perpetual Siyachitema, anoti iye nevamwe vakambotamba mumutambo uyu vane hurongwa hwekuusimudzira nechinangwa chekubika vatambi vechikwata chenyika chemaGems chemangwana.
Siyachitema vazhinji vanomuziva nechiremerera chaakapihwa icho chichagara munhoroondo yemutambo wenetball munyika muno izvo zvakamuona achitungamira vatambi vemaGems kumakwikwi eVitality World Cup akaitirwa kuLiverpool, kuEngland, munaChikunguru gore rapera.
Achibva kumakwikwi aya, Siyachitema akasvika ndokusendeka kutamba netball ndokutanga kurairidza mutambo uyu.
Parizvino ari kurairidza chikwata cheGlow Queens icho chinokwikwidza muNetball Super League.
Muhurukuro neKwayedza, Siyachitema anoti ari kumhanya-mhanya zvikuru kuronga nevamwe vakambotamba mutambo uyu vekumapurovhinzi akasiyana kuti vasimudzire netball.
“Masvondo adarika, takasangana sevatambi vakambotamba netball kare tikambobandana mumutambo uyu. Tapedza, takagara pasi ndokukurukura kuti todii kuti tibatsirane pakusimudzira mutambo uyu. Ini ndave kurairidza mutambo uyu saka ndinoda chaizvo kuti vandakatamba navo kare vandibatsire muhurongwa hwangu uhu kuti ndifambe naho,” anodaro.
Siyachitema anoti shuviro yake kuti vese vakambotamba mutambo uyu vawanikwe vachiita mabasa akasiyana anosanganisira kurairidza kana kupinda muzvigaro zvekutungamira netball.
“Sevatambi vakambotamba mutambo uyu, zvakakosha chaizvo kuti tiwanikwe tichitora mabasa akasiyana uye tichironga kuti mutambo uyu wofamba sei. Isu takambotamba uye tinoziva zvinenge zvichiitika saka tinofanirwa kupinda mumutambo uyu toitawo mabasa ekuusimudzira.
“Saka tiri kutenderera mapurovhinzi akasiyana tichitamba nekukurukura neshasha dzakambotamba netball tichironga kuti toita sei kuti netball iende kumberi,” anodaro Siyachitema.